China LBO Crystal Manufacturer na ngwaahịa | Dien
Nhazi Crystal: Orthorhombic, Oghere ohere Pna21, Otu Point mm2
Ngwakọta oke: a = 8.4473Å, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2
Ebe na-agbaze: Banyere 834 ℃
Mohs ekweghị ekwe: 6
Njupụta: 2.47g / cm3
Ndị na-amụbawanye Ọganihu Ahụ: αx = 10.8x10-5 / K, αy = -8.8x10-5 / K, =z = 3.4x10-5 / K
=x = 10.8x10-5 / K, =y = -8.8x10-5 / K, =z = 3.4x10-5 / K: 3.5W / m / K
LBO (Lithium Triborate - LiB3O5) bụzi ihe eji ewu ewu maka Second Harmonic Generation (SHG) nke 1064nm ikike dị elu (dị ka onye nnọchi KTP) na Nchịkọta Frequency Generation (SFG) nke isi iyi 1064nm iji nweta ọkụ UV na 355nm .
LBO bụ ihe nkwekọrịta maka SHG na THG nke Nd: YAG na Nd: YLF, na-eji ụdị M ma ọ bụ ụdị II. Maka SHG na ime ụlọ okpomọkụ, pịnye m phase match nwere ike iru ma nwee ọnụọgụ SHG kachasị arụ ọrụ na isi XY na XZ ụgbọ elu n'ogologo ogologo si 551nm ruo 2600nm. SHG ntụgharị arụmọrụ ka ihe karịrị 70% maka usu na 30% maka cw Nd: YAG lasers, yana THG mgbanwe ntụgharị karịrị 60% maka usu Nd: YAG laser ahụla.
LBO bu ezigbo crystal NLO maka OPOs na OPAs nwere ogologo ntụgharị ogologo na ikike dị elu. OPO na OPA ndị a na-agbapụta site na SHG na THG nke Nd: YAG laser na XeCl excimer laser na 308nm ka akọọrọ. Njirimara pụrụ iche nke ụdị nke m na ụdị II nke abụọ yana NCPM na-ahapụ nnukwu ụlọ na nyocha na ngwa nke LBO's OPO na OPA.
• Mgbasa sara mbara sitere na 160nm ruo 2600nm;
• homogeneity dị elu (δn≈10-6 / cm) na enweghị nnabata;
• Dịtụ nnukwu SHG ọnụọgụ bara uru (ihe dị ka okpukpu atọ na KDP);
• Nnukwu nnabata nnabata na obere ije-apụ;
• Pịnye m na pịnye II na-abụghị oké egwu adọ kenha (NCPM) na a obosara nkebi nso;
• Spectral NCPM dị nso na 1300nm.
• Ihe karịrị 480mW mmepụta na 395nm na-eme site na ugboro abụọ na-agbanye 2W mode-ekpochi Ti: Sapphire laser (<2ps, 82MHz). Ogologo ntụgharị nke 700-900nm kpuchiri ya na kristal Lx 5x3x8mm3.
• N'ime 80W mmepụta akwụkwọ ndụ na-enwetara site na SHG nke Q-Switched Nd: YAG laser na ụdị II 18mm ogologo LBO kristal.
• Ugboro abụọ nke diode pump Nd: YLF laser (> 500μJ @ 1047nm, <7ns, 0-10KHz) ruru ihe karịrị 40% ntụgharị ntụgharị na kristal LBO 9mm ogologo.
• Mmepụta VUV na 187.7 nm na-enweta site na nchikota ugboro-ọgbọ.
• A na-enweta 2mJ / usu esemokwu a na-ejedebe na 355nm site na intracavity ugboro atọ nke Q-gbanwere Nd: YAG laser.
• A nnọọ elu n'ozuzu akakabarede arụmọrụ na 540-1030nm tunable wavelength nso e nwetara na OPO pumped na 355nm.
• Typedị M OPA na-agbapụta na 355nm na arụmọrụ mgbapụta mgbapụta mgbapụta mgba ọkụ nke 30%.
• Type II NCPM OPO pumped by a XeCl excimer laser at 308nm enwetala 16.5% ntughari arụmọrụ, na agafeghị oke tunable wavelength àmà nwere ike nweta na dị iche iche pumping isi mmalite na okpomọkụ n'iji ya gee ntị.
• Site n'iji usoro NCPM mee ihe, pịnye m OPA nke SHG nke Nd: YAG laser gbara na 532nm ka a hụrụ iji kpuchie ọtụtụ ntụgharị si na 750nm ruo 1800nm ​​site na ịpị ọkụ na-esi na 106.5 ℃ ruo 148.5 ℃.
• Site na iji ụdị II NCPM LBO dị ka ngwa nrịba anya ngwa ngwa (OPG) na pịnye m nke dị oke mkpa-kwekọrịtara BBO dịka OPA, ụzọ ntanetị wara warara (0.15nm) na mgbapụta mgbapụta mgbapụta mgbapụta dị elu (32.7%) nwetara mgbe 4.8mJ, 30ps laser na-agbapụta ya na 354.7nm. Ejiri 482.6nm ruo 415.9nm kpuchie ụda olu site na ịbawanye okpomọkụ nke LBO ma ọ bụ site na BBO na-agbanwe.
Orthorhombic, Oghere ohere Pna21, Otu Point mm2
Banyere 834 ℃
Mohs ekweghị ekwe
Ndị na-amụbawanye Igwe Ọgba
=x = 10.8 × 10-5 / K, =y = -8.8 × 10-5 / K, αz = 3.4 × 10-5 / K
Ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na-eme ka ihe dị mma
Uzo doro anya
SHG adọ Matchable iche
551-2600nm (Pịnye m) 790-2150nm (Typedị II)
Therm-optic ọnụọgụ (/ ℃, λ na )m)
dnz / dT = (- 6.3-2.1 λ) X10-6
<0.1% / cm na 1064nm <0.3% / cm na 532nm
Nnabata nke mmụọ
6.54mrad · cm (φ, Pịnye M, 1064 SHG)
15.27mrad · cm (θ, Typedị II, 1064 SHG)
4.7 ℃ · cm (Pịnye M, 1064 SHG)
7.5 ℃ · cm (Typedị II, 1064 SHG)
1.0nm · cm (Pịnye M, 1064 SHG)
1.3nm · cm (Typedị II, 1064 SHG)
0.60 Celsius (Pịnye M 1064 SHG)
0.12 Celsius (IIdị II 1064 SHG)
Clear oghere Central 90% nke dayameta Ọ dịghị ụzọ a na-ahụ anya a na-achụsasị anya ma ọ bụ ebe etiti mgbe laser 50mW na-enyocha
Ewepụghị erughị λ / 8 @ 633nm
Ebugharị ebugharị ebugharị erughị λ / 8 @ 633nm
Ndekota mma karịa 20 aak sekọnd
Nkịtị ndidi Θ≤0.25 Celsius, △ φ≤0.25 Celsius
Zọ mbata [GW / cm2] > 10 maka 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (a na-egbu ya egbu naanị)> 1 maka 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-mkpuchi)> 0,5 maka 532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-etinyere)
LiB3O5 (LBO) Nkume